BAAQ: Jaaliyadda.Beesha Sade ee Biljamka oo ka tacsiyeeyey Shaqaaqadii dhawaan Caabudwaaq ka dhacday. – Gedo Times
BAAQ: Jaaliyadda.Beesha Sade ee Biljamka oo ka tacsiyeeyey Shaqaaqadii dhawaan Caabudwaaq ka dhacday.
10th September 2016 Mohamed Abdi Somali News, Wararka Maanta 3
iyadoo dhawaan degmada caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud.ay ka dhacday.shaqaaqo sababtay.dhimasho iyo dhaawac, ayaa waxaa gedo times dhambaal,tacsiyeed soo,gaarsiiyay.Jaaliyadda Beesha Sade.ee ku,nool.wadanka Biljamka.
Afhayeen ku hadlay Magaca Jaaliyadaasi oo lagu magacaabo mahad Gedo.ayaa tacsi tiiraanyo leh u.diray guud.ahaan.shacabka ree caabudwaaq.gaar.ahaane.ehelada.iyo qaraabada.nabadoonada geeriyooday iyo kuwa dhawaaca ahba.
Mudane Mahad ayaa geesta.kale ku,baaqay in laga.baaqsado dhibaatooyinka.noocani ah ee soo laablaabmay, kuwaas oo uu ku tilmaamay falal wuxuushnimo ah.
Jaaliyadda ayaa sheegtay in ay si adag u cambaareynayaan falalkaas iyo cidii ku kacdaybo,iyagoo dhinaca kale baraarujiyay qorshaha nabad soo,celinta ah ee ay wadaan Ugaaska.Beesha Sade Bari ugaas Axmed BArre Cali Taakooy iyo duubab.dhaqameedyada.degmadaasi ku nool kuwaas oo aan ka seexan daminta xiisadaha degmadaasi kajiray,tan.iyo intii uu dhacay falka ay ku dhinteen Nabadoonada dad kale oo badane lagu.dhaawacay.
Dhinaca waxaa Faanoole fari kama.qodna.ah wali Dhambaalada Tacsiyeed ee soo,gaaraya Warqabadka.Gedo Times kuwaas oo dhamaantood ka siman.cabaareynta.ay u jeedinayaan dadkii falkaasi geystay iyo,baaq.kale oo ah in xiisadda.halkaasi lagu damiyo.
Daawo: Qaabkii Ciidamada Jubaland, Amisom Uweerareen Alshabab
DAAWO: Arday,Reer Gedo ah oo Deeq Waxbarasho ka.heshay Wadanka Maroko ee Waqooyiga Afrika.